Zimbabwe law to hit Chinese firms - Global Times
By Ma Jingjing and Chu Daye Source:Global Times Published: 2016-3-28 0:08:01
Concerns expressed over need to sell 51 percent stake
A street view in Harare, capital of Zimbabwe Photo: IC
"Our business will be affected by the new policy and we are considering how to comply with the government's regulation before the deadline," a member of staff with Zimbabwe Nantong International, a construction firm, told the Global Times Sunday.
"Due to sanctions, Western companies' investment in Zimbabwe is limited, and the country's foreign investors are mainly from China, India, and some African countries such as South Africa," Zhang told the Global Times Sunday. There is an economic nationalist element in Zimbabwe, Zhang noted.
Won't help Zimbabwe
"The policy will bring adverse effects for the nation's economic development and long-term economic interests," Wang said.
China has been one of Zimbabwe's major investors in recent years, according to the same Xinhua report. About 100 large and medium-sized Chinese enterprises currently have projects in the country, and China's non-financial direct investment into Zimbabwe in 2013 exceeded $600 million, more than from any other country that year, the report said.